The Rope (Own Creation) by Thant Kyal Sin at Inkitt
Thant Kyal Sin would love your feedback! Gotafew minutes to writeareview?
The Rope (Own Creation)
Thant Kyal Sin 1 story
အသကျအရှယျ၊ ရညျရှယျခကျြ၊ ခံယူခကျြ၊ စရိုကျသဘာဝကှာခွားသော အမြိုးသမီးနှဈဦးကွားမှ သံယောဇဉျအကွောငျး
Thant Kyal Sin
Part - 1 (Zaw Gyi)
ကျွန်မ နာမည် သန္တာရောင် ... မြောင်းမြအပိုင် ခွေးလေးကြီးဆိုတဲ့ရွာမှာနေတယ်... ကျွန်မက အထက်တန်းပြဆရာမ... ကျွန်မမှာ မိသားစုဆိုလို့ အမေနဲ့ အစ်ကိုပဲ ရှိတယ်။ ကိုကြီးကလည်း ကျွန်မကိုဆို အမြဲအလိုလိုက်တော့ ကျွန်မ အသက် အခု ၃၄ ပြည့်တော့မှာတောင် မေမေနဲ့ ကိုကြီးက ကလေးလေးလို သတ်မှတ်နေကြတုန်း...
မေမေ - ''သမီး ပစ္စည်းတွေ စုံပြီလား... ဘာလိုသေးလဲ... နင့်အစ်ကို အပြင်သွားတာ မှာရင်မှာလိုက်လေ..."
ကျွန်မ - " အကုန်စီစဉ်ပြီးပါပြီ မေမေရဲ့ ဒါက ပထမဆုံး သမီး တစ်ယောက်တည်း Trip ထွက်တာလဲ မဟုတ်ဘူး... သမီး လည်း မငယ်တော့ဘူး... ဒီလောက်တော့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်ပါပြီ..."
မေမေ - " တော်စမ်း သန္တာ... နင်ဘယ်လောက်ပဲ အသက်ကြီးကြီး ငါ့အတွက်တော့ ကလေးလေးပဲ..."
ကျွန်မ ရယ်လိုက်ပြီး မေမေ့အား ဖက်လိုက်လေသည်။
ကျွန်မ - " ဪ... မေမေရယ်... မေမေ သမီးကို အလုံးစုံ စိတ်ချလို့ ရနေပါပြီ ... ၃၄ ဆိုတာ ငယ်တော့တဲ့ အရွယ်လည်း မဟုတ်ဘူး... အဲ့လောက် စိတ်မပူပါနဲ့... မေမေ ပဲ ပင်ပန်းတယ်..."
မေမေ - " စိတ်ချချင်လို့ ယောက်ျားယူပါဆိုတော့လည်း ညည်းက ယူလို့လား... ရည်းစားဖြင့် မူးလို့ရှူစရာတောင် မရှိဘဲ... "
ကျွန်မ ရယ်လိုက်လေသည်။ မေမေ့အား ဖက်ထားရင် မေမေ့ မျက်နှာကြည့်ကာ...
ကျွန်မ - " မေမေကလည်း သမီး ယောက်ျားယူလိုက်ရင် မေမေ့ကို ဘယ်သူ စောင့်ရှောက်မလဲ... မေမေ့သားက ဘယ်လောက် အားကိုးရလို့လဲ..."
မေမေ - " ဟဲ့... အစ်ကိုကို... "
ကျွန်မ - " သူတောင် ၃၇ ဖြစ်နေပြီ... မိန်းမ ယူလို့လား..."
မေမေ - " ကြည့်... စကားကို မနိုင်နိုင်အောင် ပြောတယ် "
ပြောရင်း မေမေ ရယ်လိုက်လေသည်။ မေမေ့ အပြုံးတွေကို မြင်တိုင်း ကျွန်မ ကြည်နူးရသည်။ ကျွန်မတို့ ဖတဆိုး မောင်နှမ နှစ်ယောက် ကို ဒီအရွယ်ထိ မေမေ လိုလေသေးမရှိလေအောင် ထားခဲ့လေသည်။ မေမေ ရယ်မောနေတာကိုသာ ကျွန်မ အမြဲ မြင်ချင်သည်။
ဘုရားဖူးကား စတင်ထွက်မည့် စုရပ် ကားစီစဉ်သူ အန်တီမြ၏ အိမ်သို့ ကျွန်မ ကားမထွက်မီ တစ်နာရီ ကြို၍ ရောက်နေသည်။ တော်ရုံဆိုလျှင် ကျွန်မ မြို့ပေါ်သို့သိပ်မရောက်ဖြစ်ပေ။
တဖြည်းဖြည်း ကားလာစောင့်သူများ များလာလေသည်။ ကျွန်မ မေမေ့ဆီ ဖုန်းဆက်နေစဉ် အိမ်တွင်း ကောင်မလေး တစ်ဦးနှင့် သူမ၏ မိခင်ဖြစ်ဟန်တူသည့် အန်တီ တစ်ဦး ဝင်လာလေသည်။
ထိုကလေးမကို ကျွန်မ ငေးကြည့်နေမိသည်။ သူမ၏ ပါဝါမျက်မှန်က ဖုံးကွယ်ထားသော်ငြား သူမ၏ မျက်ဝန်းဝိုင်းဝိုင်းများကို မြင်တွေ့နေရသည်။ ဖြောင့်တန်းနေသော မျက်ခုံးများနှင့် အိစင်းနေသောဂုတ်ဝဲဆံပင်ကို ကျွန်မ သေချာငေးမောကြည့်နေမိသည်။
သူမအမေ - " မီးလေး မေကြီး စိတ်ချမယ်နော်..."
သူမ - " စိတ်ချပါ မေရယ်... မေ့သမီးက မငယ်တော့ပါဘူး..."
သူမအမေ - " မနေ့တစ်နေ့ကမှ ဆယ်တန်းဖြေပြီးတယ်... လူကြီးဂိုက်ဖမ်းချင်နေပြီ... မြရေ အဲ့ဒါသာ ကြည့်ပေတော့... ဂျစ်ကန်ကန်ရယ်... တစ်ခုခုဆို အစ်မဆီကို ဖုန်းသာဆက်နော်..."
အန်တီမြ - " ကလေးက လိမ္မာပါတယ် အစ်မရဲ့... စိတ်သိပ်မပူပါနဲ့... ကျွန်မလည်းပါတာပဲ..."
သူမအမေ - " အေး... အပ်ပါတယ် မြရယ်... ဆိုင်လည်းတစ်ဖက်နဲ့မို့ အစ်မ ပြန်ဦးမယ်နော်... မီးလေး... တစ်နေ့တစ်ခါလောက်တော့ ဖုန်းဆက်ဦးနော်... အစစအရာရာ ဂရုစိုက်..."
သူမ - " မေ ... ဖုန်းBill ထည့်ပေးဦး..."
သူမအမေ - " အေး အေး... ထည့်ပေးလိုက်မယ်... ဂရုစိုက်နော် မီးလေး... စိတ်ချမယ်နော်..."
သူမလေး ပြုံး၍ ခေါင်းငြိမ့်လိုက်လေသည်။
သူမ၏ မိခင်က သူမအား နှုတ်ဆက်၍ အိမ်ရှေ့၌ရပ်ထားသော Fielder ကားဖြူလေးပေါ်သို့ တက်သွားလေသည်။
ကျွန်မ ကားပေါ်၌ ခုံနံပါတ်ရှာကာ ကျွန်မ ထိုင်ခုံအထက်သို့ ပစ္စည်းအချို့ တင်နေစဉ် အနောက်မှ ရေမွှေးနံ့ကဲ့သို့ ရနံ့တစ်မျိုးရလေသည်။
ကျွန်မ နောက်သို့ လှည့်ကြည့်လိုက်မိသည်။
သူမလေးက နားကြပ်တပ်ထား၍ ထိုင်ခုံပေါ်၌ အေးဆေးစွာ ထိုင်နေလေသည်။
သူမလေး ကျွန်မကို မော့ကြည့်လေသည်။ ကျွန်မလည်း ပြုံးပြလိုက်မိသည်။ သူမလည်း ပြန်လည်ပြုံးပြ၍ သူမ၏ ဖုန်းကိုသာ ပြန်ကြည့်နေလေသည်။
ကားသည် လေးဆယ့်ငါးယောက်စီးကား ဖြစ်သည်။ ကားပေါ်တွင် အခြားမိသားစု သုံးစု၊ ညီအစ်မဖြစ်ဟန်တူသည့် ကောင်မလေးနှစ်ယောက်၊ ကျွန်မနှင့်ရွယ်တူ ကျွန်မတို့ ရှေ့ရွာမှ ညီအစ်မနှစ်ယောက်၊ အသက်ငါးဆယ်ခန့် အန်တီကြီးနှင့် အသက်ရှစ်နှစ်ခန့်သားဖြစ်သူ၊ ကားပိုင်ရှင် လင်မယား၊ ခရီးစီစဉ်သူ အန်တီမြ၊ နှင့် အသက်ငါးဆယ်ကျော် အန်တီကြီးနှစ်ယောက် လိုက်ပါလာကြသည်။
ကျွန်မ၏ နံဘေး ပြတင်းပေါက်ဘက်တွင် အဒေါ်ကြီး တစ်ဦးထိုင်လေသည်။ ကျွန်မ၏ အခြားဘေးတစ်ဖက် လျှောက်လမ်းခြား၍ သူမ ထိုင်လေသည်။ သူမနံဘေးပြတင်းတံခါးဘက်တွင်လည်း အဒေါ်ကြီး တစ်ဦးထိုင်လေသည်။
ကျွန်မလည်း ရွာမှ ဆိုင်ကယ်စီးလာရသောကြောင့် ပင်ပန်းကာ မြောင်းမြမှ ကားထွက်လာပြီး မကြာမီ အိပ်ပျော်သွားရာ နေ့လယ်စာ စားရန် ပန်းတနော်၌ ကားရပ်ခါမှ နိုးလာလေသည်။
ကျွန်မ နေ့လယ်စာ စားရန် စားသောက်ဆိုင်ထဲဝင်၍ ထိုင်နေစဉ် ဘေးဝိုင်းသို့ သူမလေးနှင့် သူမနှင့်အတူထိုင်သော အဒေါ်က ဝင်ထိုင်လိုက်လေသည်။
သူမ - " အန်တီ toilet သွားချင်သွားလေ... အသန့်လေး ဒီမှာ ပစ္စည်းစောင့်ပေးမယ်..."
အန်တီ - " ရပါတယ် သန့်ရဲ့... ကားထွက်ခါနီးမှ အန်တီ သွားမယ်..."
သူမ(သန့်) - " ဒါဆိုလေ... အိတ်ကလေး ခဏ ယူထားပေးပါလား အသန့်လေး Toilet ဝင်ဦးမယ်..."
အန်တီ - " ရတယ်... ထားခဲ့လေ... "
သန့်က ထိုအန်တီအား ပြုံးပြကာ ထထွက်သွားလေသည်။
အန်တီ - " သမီး တစ်ယောက်တည်းလား အန်တီတို့နဲ့လာထိုင်လေ..."
ကျွန်မ - " ဟုတ်... ရပါတယ် အန်တီ... ကျွန်မက ခဏပဲ ထိုင်မှာ အအေးမှာထားတာရရင် ဟိုဘက် မုန့်ထွက်ဝယ်ချင်သေးလို့... "
အန်တီကြီးက ကျွန်မအား ပြုံး၍ခေါင်းငြိမ့်ပြလေသည်။
ကျွန်မလည်း မှာထားသောအအေးဘူး ရသည့်အခါ ထထွက်၍ လမ်း၌ စားရန်မုန့်ထွက်ဝယ်လေသည်။
နောက်တစ်နေ့ မနက် သုံးနာရီခန့်တွင် ကျွန်မတို့ ထားဝယ်သို့ ရောက်ရှိလေသည်။ ဘုရားဖူးယာဉ်က ကြိုတင်ချိတ်ဆက်ထားသော ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ ရောက်ရာ၌ ပစ္စည်းများနေရာချ၍ အနားယူကြလေသည်။
မနက် ခြောက်နာရီခွဲ ကျွန်မ အိပ်ရာမှ နိုးသောအခါ ရေချိုးရန် ပစ္စည်းများ ယူ၍ ရေချိုးခန်းရှိရာသို့ ထွက်အလာ လမ်း၌ ရေလဲထဘီရင်လျားပေါ်၌ မျက်နှာသုတ်ပုဝါအကြီး ခြုံထားသော သန့်နှင့် တွေ့လေရာ ကျွန်မက ပြုံး၍
ကျွန်မ - " ညီမလေး အစောကြီးပဲ..."
သူမက ပြုံးပြ၍ ခေါင်းငြိမ့်ကာ ထွက်သွားလေသည်။
ကျွန်မလည်း နှုတ်နည်းလွန်းသော သူမကို နားမလည်စွာ ကျန်ခဲ့လေရာမှ အနောက်မှ အသံကြား၍ လှည့်ကြည့်ရာ
သန့် - " မမ ရေချိုးကန်က ရေညှိတွေ ရှိတယ်... သတိထားဦး..."
ဟု ကျွန်မကို ကြည့်၍ ဆိုကာ လှည့်ထွက်သွားလေသည်။
ကျွန်မလည်း သန့်၏ နောက်ကျောကို ငေးကြည့်ရင်း တော်တော်ထူးဆန်းသည်ဟု မှတ်ချက် ချမိလေသည်။
ကျွန်မ ရေချိုးပြီး၍ ပြန်တက်လာသော် အချို့သူများက နိုးနေပြီဖြစ်၍ ရေချိုးရန် ပြင်ဆင်နေကြလေသည်။
ကျွန်မ နေရာသည် ဝင်ဝင်ချင်းတံခါးမဘက်ဖြစ်ကာ ကျွန်မနှင့် ခပ်လှမ်းလှမ်း ခြေရင်းဘက်ခြမ်းရှိ သူမနေရာ၌ ဖုန်းထိုင်ပြောနေသော သန့်ကို လှမ်းကြည့်မိသည်။
ခါးအထိအနက်ရောင်ကွက် ခါးအောက်ပိုင်းတွင် အနက်ရောင်ပြောင်ဖြစ်ကာ အနားတွင် အနက်ကွက် ကွပ်ထားသော ဂါဝန်ကို ဝတ်ဆင်ထားသော သန့်သည် အလွန်ပင် ကလေးဆန်၍ ချစ်ဖို့ကောင်းနေလေသည်။
ကျွန်မတို့ ဘုန်းကြီးကျောင်း ပတ်ဝန်းကျင်၌ မနက်စားရန် နေရာလိုက်ရှာ ကြလေသည်။ သန့်က အန်တီမြ၊ သန့်ဘေး၌ထိုင်သည့်အန်တီ(အန်တီစိန်)၊ ကျွန်မဘေး၌ထိုင်သောအန်တီ(အန်တီအေး) တို့က အတူတူ လက်ဝဲဘက်သို့ ထွက်သွားလေ၏။
အန်တီမြက သန့်အား စကားလှမ်းပြောရင်း ဘုန်းကြီးကျောင်း မုခ်ဝ၌ ရပ်နေသော ကျွန်မကို မြင်ကာ လှမ်းခေါ်လေသည်။
အန်တီမြ - " ဆရာမလေး ကျွန်မတို့ ဟိုဘက်နား မနက်စာ သွားစားမလို့ အတူလိုက်ခဲ့ပါလား "
ကျွန်မ - " ဟုတ်ကဲ့... အန်တီ..."
ကျွန်မတို့ လျှောက်လာခဲ့၍ မကြာမီ လမ်းချိုးတစ်ခု၏ ထိပ်တွင် မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်လေး တစ်ဆိုင်တွေ့လေသည်။
ကျွန်မတို့က မုန့်ဟင်းခါးမှာကာ စားကြသော်လည်း သန့်က ကော်ဖီနှင့် မုန့်ဟင်းခါးထဲထည့်သည့် ဘူးသီးကြော်နှင့် ပဲကြော်ကိုသာ စားလေသည်။
အန်တီမြ - " ဟယ်... သမီးကို မေ့ပြီး မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်ထိုင်လိုက်တာ အန်တီ့ကို မပြောဘူး... လက္ဘက်ရည်ဆိုင် ရှာထိုင်မှာပေါ့..."
သန့် - " မဟုတ်တာပဲ... အသန့်လေးက မကြိုက်လို့ မစားရုံသက်သက်ပဲကို..."
အန်တီမြ - " အခုက စားစရာနည်းသွားတာပေါ့... "
သန့် - " မဟုတ်တာပဲ... အသန့်လေးက ဒီအတိုင်းလည်း မနက်စာ သိပ်မစားဖြစ်ဘူးရယ်... ပြီးတော့ မုန့်တွေလည်း ပါသေးတယ် ကားပေါ်စားလို့ရတယ်..."
အန်တီစိန် - " ဟင်... သမီး သန့်က ကားပေါ်တုန်းက ပြောတော့ မြောင်းမြသူဆို... မုန့်ဟင်းခါး မကြိုက်ဘူးတဲ့ အံ့သြပါရဲ့..."
သန့် - " အသန့်လေးက မြောင်းမြမှာမွေးပေမယ့် ဖေတို့ မေတို့က မိတ္ထီလာဇာတိလေ... အသန့်လေးက အဲ့ဒါကြောင့် အညာသူဆန်တယ်... ခုမှတော်သွားတာ ငယ်ငယ်တုန်းကဆို လေသံကအစ အညာလေသံ... ခုထိလည်း အညာလေသံပေါက်ပါသေးတယ်..."
သန့်က ပြောရင်း ရယ်လိုက်လေသည်။
ကျွန်မတို့ မနက် ကိုးနာရီခန့်တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ စတင်ထွက်ခဲ့ကြလေသည်။
ပထမဦးဆုံး ကျွန်မတို့ သွားသော ဘုရားမှာ ရှင်တောင့်ပုံဘုရား ဖြစ်လေသည်။ ကျွန်မတို့သည် တောင်ပေါ်သို့ ကားသီးသန့်ငှါး၍တက်ရလေသည်။
Light Truck ကားတစ်စီးလျှင် ဆယ့်ငါးယောက်စီးကြလေရာ ကျွန်မနှင့်သန့်က တစ်စီးတည်းကျလေသည်။ သန့်က ကျွန်မ၏ ဘယ်ဘက်မျက်စောင်းထိုးတွင် ထိုင်လေသည်။
ကားစထွက်သော် သန့်သည် ယုန်ပုံပါသည့် Mask ကို တပ်လိုက်လေသည်။ သူမ၏ ပါဝါမျက်မှန် အပေါ်၌ သံလိုက်ကပ် နေကာမှန် တပ်လိုက်လေသည်။
(ပါဝါမျက်မှန်၏ ကိုင်းထောင့်များတွင် သံလိုက်မြှုပ်ထားကာ အပေါ်မှ ကိုင်းမပါသည့် နေကာမှန်၏ဘေးထောင့်များ၌ သံလိုက်ပါသည့် မျက်မှန်မျိုး။ အချို့ ပါဝါမျက်မှန်၌ မူလကတည်းက ပါဝင်သည်။ ညှပ်နှင့် ညှပ်ရခြင်းမျိုး မဟုတ်။)
ဘုရားပေါ်၌ သန့်သည် ဘုရားရှိခိုးပြီး သူမ၏ Sony ကင်မရာလေးဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှုခင်းများကို ရိုက်နေလေသည်။
ဒုတိယ သွားရောက်သည့် ရှင်ပင်ခရုသို့ရောက်သော် နေအတော်ပူနေလေပြီ။ ကားသည်လည်း ဘုရားမုခ်ဦးနှင့် ခပ်လှမ်းလှမ်းတွင် ရပ်လေသည်။
ကျွန်မရှေ့တွင် သန့်က ဆင်း၍ သူမကခြုံထားသော ပုဝါကို ဖြန့်ကာ ဦးခေါင်းထက်မိုးလိုက်စဉ် ကျွန်မထီးဖွင့်၍ သူမကိုဆောင်းပေးလိုက်လေသည်။ သန့်က ကျွန်မကို လှည့်ကြည့်၍ အသံခပ်တိုးတိုးဖြင့်ဆိုလေသည်။
သန့် - " ကျေးဇူးပါ မမ"
ကျွန်မ - " ရပါတယ် ညီမလေးရယ်... ထီးမယူလာဘူးလား "
သန့် - " မေ့ကျန်ခဲ့တာ... မိုးမရွာရင် ထီးကို သတိမရတော့ဘူးရယ်..."
ကျွန်မ - " မကြီးက ဘယ်သွားသွားထီးဆောင်ထားတယ်..."
သန့် - " အသန့်လေးက ခေါက်ထီးမဆောင်တတ်ဘူး ချာလီထီး တကားကားနဲ့ လျှောက်သွားတာ..."
ပြောရင်း သွားဖွေးဖွေးလေးများပေါ်အောင် ရယ်လိုက်လေသည်။
ကျွန်မက သန့်ထက် အရပ်ပုရာ သန့်က ထီးကို ယူ၍ ကျွန်မကိုဆောင်းပေးကာ အတူသွားလေသည်။ တစ်ဖက်လမ်းသို့ ကူးရာတွင်
သန့် - " မမ... အသန့်လေး လက်ကို ချိတ်ထား... လမ်းကူးမယ်..."
ကျွန်မလည်း ခေါင်းငြိမ့်၍ သန့်၏ထီးကိုင်ထားသည့်လက်အား ချိတ်လိုက်လေသည်။
ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက် လမ်းအတူကူးကာ ဘုရားတွင်းသို့ ဝင်လေ၏။ သန့်က ဘုရားမရှိခိုးသေးဘဲ ဆင်းတုတော်အား ဓာတ်ပုံ အရင်ရိုက်လေသည်။ ထို့နောက် ကျွန်မနံဘေးထိုင်၍ ဘုရားရှိခိုးလေသည်။
ကျွန်မလည်း ဘုရားရင်ပြင် ပတ်ရန် သန့်နှင့်အတူထွက်လာစဉ် သန့်က အလှူခံမဏ္ဍပ်၌ အလှူငွေထည့်ကာ ရှင်ပင်ခရုသမိုင်းကြောင်း စာအုပ် ဝယ်လေသည်။
ဂေါပက - " သမီး အလှူရှင်နာမည် ဘယ်လိုရေးပေးရမလဲ"
သန့် - " ဦးမောင်ကို + ဒေါ်ကြူကြူခင် မိသားစု မြောင်းမြ"
ဂေါပကလူကြီးက ဖြတ်ပိုင်းပေးသည်ကို ယူ၍ ကျွန်မတို့ ထွက်လာလေသည်။
ရင်ပြင်ပေါ်ရှိ ကျောက်စာနားရှိ သစ်ပင်ရိပ်၌ ထိုင်၍ သန့်က ကင်မရာဖြင့် ဓာတ်ပုံထိုင်ရိုက်နေလေသည်။ ကျွန်မက ကျောက်စာအား ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်း ကင်မရာထဲမှ ပုံများကြည့်နေသော သန့်အား ဓာတ်ပုံခိုးရိုက်မိပြီးမှ ကျွန်မဖာသာပြုံးမိလေသည်။ သန့်က ကျွန်မကို လှည့်ကြည့်ရင်း
သန့် - " မမ... ကင်မရာ ကိုင်တတ်လား... အသန့်လေးကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးပါလားဟင်..."
ကျွန်မ - " ဟင့်အင်း... မရိုက်တတ်ဘူး... ဖုန်းနဲ့ပဲ ရိုက်ပေးမယ်လေ "
သန့်က ကင်မရာကို လည်ပင်း၌ ဆွဲထားရာမှ ချွတ်လိုက်ပြီး ထိုင်ရာမှ ထကာ
သန့် - " ဒီမှာကြည့်..."
ကျွန်မကို နောက်မှ သိုင်းဖက်လိုက်ပြီး ကင်မရာခလုတ်များကို ပြလေရာ ကျွန်မက သန့်ထက် နှစ်လက်မခန့် အရပ်ပုသဖြင့် သန့်၏ ရင်ခွင်တွင်းလုံးဝ ကျရောက်သွားကာ သန့်၏ နှာခေါင်းဝမှ ထွက်လာသော လေများကလည်း ကျွန်မ၏ နားရွက်ကို ပူနွေးစွာ ထိခတ်လေသည်။
ကျွန်မ ရုတ်တရက် နှလုံးခုန်ရပ်မတတ် ခံစားလိုက်ရလေသည်။ သန့်၏ စကားလုံးများက ကျွန်မနားတွင်းသို့ ဝင်တစ်ချက် မဝင်တစ်ချက်။
သန့် - " ဒီခလုတ်လေးနှိပ်ရုံပဲ... ဒါက Zoom ဒါက ISO ချိန်တာ Focus ကို မမ မချိန်တတ်မှာစိုးလို့ Auto နဲ့ပဲ ထားပေးမယ်......"
သန့် - " စမ်းရိုက်ကြည့် မမ"
ကျွန်မ - " ဟင်... "
သန့် - " စမ်းရိုက်ကြည့်လို့..."
ကျွန်မ - " ဒီခလုတ်လေးပဲ နှိပ်လိုက်မယ်နော်..."
သန့်က ကျွန်မကို ကြည့်ကာ ပြုံးလိုက်လေသည်။
ကျွန်မ - " မရယ်ပါနဲ့ ညီမလေးရဲ့ ... မကြီး က တစ်ခါမှမှ မရိုက်ဖူးတာကို..."
သန့် - " မဟုတ်ပါဘူး... မမရယ်... အသန့်လေးက မမ ပြောတဲ့ပုံလေးကို သဘောကျလို့..."
ကျွန်မ တကိုယ်လုံး အေးစက်သွားသလို ခံစားရသည်။ သန့်က ကျွန်မလက်ထဲ ကင်မရာ ထည့်ပေးရာ ကျွန်မလက်ကို ကိုင်မိပြီး
သန့် - " ဟယ်... လက်တွေ အေးစက်နေတာပဲ... နေမကောင်းဘူးလားဟင်..."
ကျွန်မ - " ကောင်း... ကောင်းပါတယ်... ပေး... ရိုက်ပေးမယ်...."
ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက် ဓာတ်ပုံ တစ်ယောက်တစ်လှည့် ရိုက်နေစဉ် အန်တီမြက ပြန်ရန် လှမ်းခေါ်သဖြင့် ကျွန်မတို့ ထွက်လာခဲ့ကြသည်။
ကားဆီသို့ အပြန်တွင် သန့်က ဘယ်ဘက်လက်မှထီးကိုင်ကာ ညာဘက်လက်ဖြင့် ကျွန်မ၏ ပုခုံးကိုဖက်ကာ လမ်းကူးလေသည်။ ကားဆီသို့ ရောက်လျှင် ကျွန်မလက်ထဲ ထီးထည့်ပေး၍ နှုတ်ခမ်းဆူကာ
သန့် - " အသန့်လေး ထီးမခေါက်တတ်ဘူး..."
ကျွန်မ - "ဟင်..."
ကျွန်မ ရုတ်တရက် အံ့သြသွားပြီးနောက် ရယ်လိုက်မိသဖြင့်
သန့် - " အသန့်လေး က ဒီလိုထီးမျိုးမှ မဆောင်းဖူးတာ..."
ကျွန်မ - " ဟုတ်ပါပြီ... ဘာမှ မပြောပါဘူး... "
သန့် - " မမက ရယ်တာကိုး"
ကျွန်မ - " ထူးဆန်းလို့ ရယ်မိတာပါ..."
ထို့နောက် ကျွန်မတို့ အနီးနားတွင် ထမင်းစားနားကြပြီး ခရီးဆက်ကြလေသည်။
တတိယဖူးမြော်သည့် ရှင်တောက်ထိန်ဘုရားသည်လည်း ကားကို မုခ်ဦး၌သာ ထားခဲ့ရကာ လမ်းလျှောက်၍ တက်ရလေသည်။ တစ်လမ်းလုံး ရောက်တတ်ရာရာ စကားများ ပြောလာကြလေ၏။
ကျွန်မ - " ညီမလေးက ဆယ်တန်းဖြေထားတာလား..."
သန့် - " ဟုတ်တယ် ... "
ကျွန်မ - " ဘယ်ကျောင်းကနေ ဖြေတာလဲ..."
သန့် - " မဟာ ကနေဖြေတာ ... ဒါပေမယ့် တကယ်က အိမ်မှာပဲ စာခေါ်သင်တာပါ... ကျောင်းမှာ မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ် နှစ်ချိန်ပဲ တက်တာ... သင်္ချာကနေ Bio ထိ အိမ်မှာ ခေါ်သင်တာ..."
ကျွန်မ - " ဪ... မဟာ ဆိုတာ ၁၀လမ်းထဲက မဟုတ်လား... အဲ့ကနေ မကြီးရဲ့ cousin တစ်ယောက် ဖြေထားတယ်... နှင်းပန်းအိမ် ဆိုတာလေ... သိလား သူ့ကို "
သန့် - " ဪ... သူက မမရဲ့ Cousin လား... သိတာပေါ့ တစ်ချိန်တုန်းက အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းကြီးကို..."
သန့်က ပြုံး၍ ပြောလေသည်။
လမ်း၌ ဈေးဆိုင်လေးများတွင် မုန့်များ ဝင်ဝယ်နေကြရာ ဘုရားပေါ်ရောက်ပြီး အမြန် ဘုရားရှိခိုး၍ ပြန်ဆင်းခဲ့ကြလေသည်။
ထိုမှအပြန် မောင်းမကန် ကမ်းခြေသို့ ဝင်ကြရာ...
သန့်က ကမ်းခြေရှိ စားသောက်ဆိုင်တစ်ခု၌ ထိုင်၍ ကင်မရာထဲမှ ပုံများကို ကူးနေလေသည်။
ကျွန်မ - " ညီမလေး ရေမကစားဘူးလား..."
သန့် - " ဟင့်အင်း... အင်္ကျီအပိုမှ မပါတာ..."
ကျွန်မ - " မောင်းမကန် အမှတ်တရအင်္ကျီဝယ်ဝတ်လို့ ရတာပဲ..."
သန့် - " တော်ပါပြီ မမရယ်... နေပူသေးတယ် မဆော့ချင်တော့ပါဘူး... စက်စဲ ရောက်ဦးမှာပဲကို... အဲ့တော့မှပဲ ဆော့တော့မယ်... "
သန့် - " ဒါနဲ့... မနက်က အန်တီမြက မမကို ဆရာမလို့ ခေါ်လိုက်သလားလို့ မမက ဆရာမလား"
ကျွန်မ - " ဟုတ်တယ်... အထက်တန်းပြ"
သန့် - " ဪ... ဘယ်ကျောင်းမှာလဲ... "
ကျွန်မ - " လူတော်မှာ..."
သန့် - " လူတော်? ? ?"
ကျွန်မ - " အင်း မြောင်းမြအပိုင်ရွာလေ... မြို့နဲ့ သိပ်မဝေးဘူး... "
သန့် - " ဪ... မမက အဲ့ရွာကလား... "
ကျွန်မ - " မဟုတ်ဘူး... ခွေးလေးကြီးက"
သန့် - " ဟမ်... ဘာကြီး..."
ကျွန်မ - " ခွေးလေးကြီး လေ... မကြားဖူးဘူးလား..."
သန့် - " အသန့်လေးက မြောင်းမြခရိုင် အပိုင် ဘယ်နှမြို့ ရှိတယ်လောက်ပဲ သိတာ... ရွာတွေအထိ မသိဘူး... ဇာတိလည်း မဟုတ်ကြတော့လေ... ပြီးတော့ ဘယ်ရွာမှလဲ မရောက်ဖူးဘူး... သိလ္လာလား အဲ့ကိုပဲ အသိအလှူတစ်ခါ ရောက်ဖူးတယ်..."
ကျွန်မ - "ဟယ်... အိမ်တွင်းပုန်းလေးပဲ..."
သန့် - " ဟီး... မမ အားသွင်းကြိုးပါလား... ပုံတွေ ကူးပေးမယ်..."
ကျွန်မ - " ဟင့်အင်း... ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ထားခဲ့တယ်..."
သန့် - " ဒါဆို ညကျမှ ကူးပေးမယ်... အသန့်လေး ဖုန်းနဲ့လည်း ကြိုးမတူတော့ မရဘူးရယ်... အသန့်လေးက မမ အခုတင်ရင် တင်လို့ရအောင်လေ..."
ကျွန်မ - " ဪ... ရပါတယ် နောက်မှကူးလည်း... Zapya ကနေ ကူးပေးလို့ ရတယ်လေ ညီမလေး..."
သန့် - " အသန့်လေးဖုန်းက IOS ဆိုတော့ မရဘူးလေ..."
ကျွန်မ - " ဟုတ်သားပဲ... Messenger ကနေ ပို့လည်း ရတယ်လေ..."
သန့် - " အင်း... မမ acc ပေး..."
ကျွန်မ - " Thandar Thandr ရှေ့တစ်ခုက d.a.r နောက်တစ်ခုက d.r ပဲရေးတယ် "
သန့် - " ရှာလိုက်မယ်နော်..."
သန့် - " ဒီဟာလား... add လိုက်မယ်နော်..."
ကျွန်မ - " အင်း... ဪ...ဒီမှာ Shwe Thant ဆိုတာလား"
သန့် - " ဟုတ်..."
သန့် - " By the way မမနာမည်က သန္တာလား..."
ကျွန်မ - " ဟုတ်တယ်..."
သန့် က ခေါင်းငြိမ့်က ပုံများပို့ပေးနေလေသည်။ သန့်က ကျွန်မ နာမည်ရင်းကို မမေးသကဲ့ ကျွန်မကလည်း သန့်ရဲ့ နာမည်ရင်းကို မေးဖို့ စကားလုံး ရှာမရပေ။...
ထို့နောက် ကျွန်မတို့ ရှင်ဥသြဘုရားဖူးကာ ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ ပြန်ခဲ့ကြလေ၏။
1. Part - 1 (Zaw Gyi)
1 Part - 1 (Zaw Gyi)
2 Part - 1 (Unicode)
3 Part -2(zawgyi + Uni)